बैदेशिक रोजगारिमा दैवले हात र खुट्टा चुʼडेर लग्यो, २ छोरीलाई काखमा च्यापेर चुहिने खरको छानो मुनी बाट बाबाले पिडा पोखे – Sanjal Nepal
Homeसमाचारबैदेशिक रोजगारिमा दैवले हात र खुट्टा चुʼडेर लग्यो, २ छोरीलाई काखमा च्यापेर चुहिने खरको छानो मुनी बाट बाबाले पिडा पोखे
बैदेशिक रोजगारिमा दैवले हात र खुट्टा चुʼडेर लग्यो, २ छोरीलाई काखमा च्यापेर चुहिने खरको छानो मुनी बाट बाबाले पिडा पोखे
December 23, 2020 admin समाचार 1250
गुल्मी सत्यवती गाउपालिका वार्ड न १ अस्लेवाका यादब पाण्डे १० बर्ष पहिले भारत गए । विवाह गरेको २ बर्षमै उनी भारत जादा श्रीमती गर्भवती थिइन ।
सम्पत्ती कमाउने र सुन्दर परिवार बनाउने सपना बोकेर भारत पुगेका उनका सपना फुल्न पनि पाएनन जब उनी रेल बाट उत्रीदा दुर्घटनामा परे । बेहोस भएका उनी अस्पतालमा बिउँझीए बल्ल थाहा पाए उनका देब्रे तिरका हात र खुट्टा दुबै काटिएका छन ।
रमेश प्रसाईको आयु माग्दै नन्दा सिह भिडियो भयो भाइरल ( भिडियो हेर्नुस् )
श्वेतालाई करिष्माको शुभकामना- कहिलेकाही भावनालाई पैतालामुनि कुल्चिनुपर्छ !
December 9, 2020 admin समाचार 3309
नायिका करिश्मा मानन्धरले सोमबार विवाह बन्धनमा बाँधिएकी नायिका श्वेता खड्कालाई वैवाहिक जीवनको शुभकामना दिएकी छिन् । नायिका मानन्धरले सामाजिक सञ्जालमा एक भावुक सन्देश लेख्दै शुभकामना दिएकी हुन् । ‘आएको हरेक परिस्थितिको सामना गर्दै, साथै समाजका
१३ वर्षी’या बालि’कालाई २९ वर्षिय पुरुषले होटेलमा लागि रात बिताए अहिले युवती यस्तो अवस्थामा भिडियो हेर्नुहोस !
December 29, 2020 admin समाचार 725
१३ वर्षी’या बालि’कालाई २९ वर्षिय पुरुषले होटेलमा लागि रात बिताए अहिले युवती यस्तो अवस्थामा १३ वर्षी’या बालि’कालाई २९ वर्षिय पुरुषले होटेलमा लागि रात बिताए अहिले युवती यस्तो अवस्थामा १३ वर्षी’या बालि’कालाई २९ वर्षिय पुरुषले होटेलमा
November 26, 2020 admin समाचार 1517
काठमाडौ । केही दिन अगाडि भारतीय पत्रिकामा उडिसाका एक गरिब आदिवासी दाना माझीको एक यस्तो तस्वीर छापिएको छ , जसले मन मस्तिष्कमा सबै मानिसलाई नराम्रो असर गरेको छ । दाना माझी आफ्नो काँधमा श्रीमतीको लाश